Home Wararka Gudaha Xiisad dagaal oo ka taagan Magaalada Buuhoodle
Xiisad dagaal oo ka taagan Magaalada Buuhoodle
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Buuhoodle ee Gobolka Togdheer ayaa waxaa ay sheegayaan in xalay ilaa saakay ay Magaaladaas ka taagan tahay xiisad dagaal oo u dhaxeeysa Ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland.
Xiisadda ayaa waxaa ay ka dambeeysay kadib markii Somaliland ay saacadihii la soo dhaafay Ciidamo farabadan geysay duleedka Magaalada Buuhoodle, iyada oo dooneysa inay qabsato.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Somaliland ay duleedka Magaalada Buuhoodle ka wadaan dhaq dhaqaaqyo halka Ciidamo farabadan oo Puntland todobaadkaan geysay Magaalada Buuhoodle ay dhankooda wadaan dhaq dhaqaaqyo Ciidan oo is difaac ah.
Dadka kunool Magaalada Buuhoodle ayaa qaarkood waxaa ay sheegeen inay cabsi dareemayaan maadaama Ciidamo iska soo horjeeda ay dhaq dhaqaayo wadaan, iyaga oo ugu baaqay labada Maamul inay xiisadda dagaal joojiyaan.
Magaalada Buuhoodle ee Gobolka Togdheer ayaa soo martay Maamulo kala duwan, hayeeshee Puntland ayaa hadda ku adkeysaneyso inay ka difaaci doonto Somaliland oo dooneysa inay la wareegto.
Previous articleLaamaha Amniga degaanka Nambar-konton oo ka hortegay weerar kaga yimid Al-Shabaab
Next articleXogta Dahsoon xaqiiq ah lagguna kasoonnaan karro Madaxweyne Ku-xigeenka Hir-shabelle Yuusuf Dabageed ayaa Xalay Madaxweyne Xasan Sheekh Cafis weydiistay Balse lo diiday in Sawirro lalagalo Daba-geed (wax badan ka ogoow)
Guddigii loo xil saaray baaritaanka weerarkii Hoyga Nabaddoon Yaasiin ee Gaalkacyo...
Amiir Charles oo “boorso ay ku jirto lacag 1 milyan oo...
Sheekh Aadan Madoobe oo ku baaqay in Waqti lagu bixiyo sidii...